Dị Ederede nke Akụkọ Akụkọ na Corpolọ Ọrụ Na-ekwu Okwu
Akụkọ na vesos Corporate Speak
Tọzdee, Septemba 22, 2011 Wednesday, July 23, 2014 Douglas Karr
Ọtụtụ afọ azụ, enyere m ikike na usoro iku ego a kpọrọ Nhọrọ Ezubere Anya. Otu n'ime igodo nke usoro nyocha a na onye ọhụụ ọhụrụ nọ na-ajụ ajụjụ ghere oghe nke chọrọ ka nwa akwukwo ahụ gwa a akụkọ. Ihe kpatara ya bụ na ọ dịịrị ndị mmadụ mfe igosipụta azịza ha n'eziokwu mgbe ị gwara ha ka ha kọwaa akụkọ ahụ dum kama ịjụ ha ee ma ọ bụ ee.
Nke a bụ ihe atụ:
You na-arụ ọrụ nke ọma na oge nkwụsị? Azịza: Ee
Storified… you nwere ike ịgwa m banyere oge na-arụ ọrụ ebe ị nwere ọtụtụ oge siri ike nke ga-abụ ihe ịma aka, ma ọ bụ ikekwe ọ gaghị ekwe omume, ịme? Azịza: Akụkọ nke ị nwere ike ịjụ maka nkọwa ndị ọzọ gbasara ya.
Akụkọ a na - ekpughe ma kwesịrị ncheta. Ọtụtụ n’ime anyị anaghị echeta akwụkwọ akụkọ ikpeazụ anyị gụrụ, mana anyị na-echeta akụkọ ikpeazụ anyị gụrụ - ọ bụrụgodi gbasara azụmahịa. Na Akụkọ Orabrush bụ nke ikpeazụ na-abata m n'uche.
Usoro ọdịnaya dị na ntanetị chọrọ ka anyị kwụsị ahịa na ụlọ ọrụ na-ekwu okwu wee malite ịkọ akụkọ. Ọ bụ atụmatụ dị mkpa na ịde blọgụ Corporate. Ndị mmadụ achọghị ịnụ ụlọ ọrụ-ikwu gbasara ụlọ ọrụ gị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, ha chọrọ ịnụ akụkọ gbasara etu ndị ahịa gị si eme nke ọma site na gị na ha na-azụ ahịa!
The Fflọ Ọrụ Hoffman mepụtara ihe infographic na Akụkọ akụkọ vs. Corporate Speak. I nwekwara ike ịgụkwu banyere usoro ịkọ akụkọ na blọgụ Lou Hoffman, Isi Ishmel.
Tags: anecdotalmụrụjidealana-akpalimkparịta ụkaụlọ ọrụ na-ekwu okwudullụtọkediken'imeishmaels n'akụkụjargonịkụụwaakụkọmgbochimputaezigboroboticn'ireezigboire ụtọ salingbidocharaịkọ akụkọudidiụlọ ọrụ hoffmanokwuWritingede ederede
Anyị bụ Ndị Ọrụ Akaụntụ maka Google
Ihe ochicho ime obodo adighi egbochi mba ma obu njiko mba uwa
Sep 22, 2011 na 6:46 PM
Daalụ maka iwepụta oge iji mee ka ozi ntanetị anyị dị na ịkọ akụkọ.
Ihe omuma gi site na iji nyochaa ajuju di nma. Ahụmịhe anyị na ajụjụ a na-ejedebe na-ekwenye na onye ọ bụla nwere ikike ịkọ akụkọ.
Ugbu a, mmadụ nwere ike ọ gaghị enwe obi ụtọ nke Conan ma ọ bụ ụta nke Chris Rock, mana nke ahụ dị mma
Maka ụlọ ọrụ, ebumnuche abụghị ka ha na-achị ọchị n'akụkụ wara wara.
Ihe mgbaru ọsọ bụ "jikọọ."
Sep 22, 2011 na 6:57 PM
Bet nzọ, Lou!
Mee 30, 2012 na 3: 53 AM
Akwa na ebe siri ike. Enwere ike iji akụkọ dị iche iche mee ihe n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ na-abụkarị ihe na-adọrọ adọrọ karịa ịmegharị ụlọ ọrụ. Hụrụ infographic ahụ n'anya 🙂